Ụdị nke ike osisi: ọrụ na ịba uru | Green Renewables
Portillo nke German | 26/04/2022 12:00 | Ike ike
Eletrik bụ ihe ebumpụta ụwa nke nwere ike ime n'ụzọ dị iche iche site na ụlọ ọrụ ọkụ. Ajụjụ banyere mmalite nke ọkụ eletrik adịghị mfe: iji mee ihe dị ka ike, ọ ghaghị ịga njem dị anya. N'aka nke ọzọ, ikike mmepụta ha na ọkwa arụmọrụ ha, ya bụ, ọnụọgụ ọkụ eletrik ha nwere ike ịmepụta site na ngbanwe nke ike bụ isi, ga-adabere na akụrụngwa na nkà na ụzụ eji. Nke a bụ ihe mere ụlọ ọrụ ike ga-adabere na ike. Na Spain, isi ụdị nke ike osisi Ha bụ thermal, nuklia, ikuku na anyanwụ photovoltaic.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị ọkụ ọkụ dị iche iche dị na njirimara ha.
1 Ụdị ọkụ ọkụ
1.1 Ụlọ ọkụ ọkụ
1.2 ikuku ike osisi
1.3 ike anyanwụ
1.4 hydroelectric ike osisi
1.5 tidal ike ọdụ
2 Kedu ka ụdị ọkụ eletrik si arụ ọrụ
3 Mkpa ihe nrụpụta nuklia
Ụlọ ọkụ ọkụ
Turbines nke osisi ndị a na-amalite ịkwagharị n'ihi ụgbọ elu ụgbọ mmiri nke a na-enweta site na kpo oku mmiri. Igwe ọkụ ọkụ na-emepụta ọkụ eletrik n'ụzọ dị iche iche: n'etiti ha okpomọkụ
Omuma: Ha na-enweta ume ha site na mmanụ ọkụ na-ere ọkụ.
Site na biomass: Ha na-enweta ume ha site n'oké ọhịa na-ere ọkụ, ihe ndị fọdụrụ n'ọrụ ugbo ma ọ bụ ihe ọkụkụ ndị a ma ama.
Site na mkpofu siri ike nke ime obodo: Ha na-enweta ume site n'ịkpọ ihe mkpofu a gwọworo ọkụ.
ụlọ ọrụ ike nuklia: Ha na-emepụta ike site na mmeghachi omume fission nke atọm uranium. N'aka nke ọzọ, igwe na-ekpo ọkụ nke anyanwụ na-ekpo ọkụ site na itinye uche na ike anyanwụ na, n'ikpeazụ, geothermal osisi na-erite uru nke okpomọkụ sitere n'ime ụwa.
ikuku ike osisi
Ka ikuku na-arụ ọrụ na ikuku turbine ikuku, turbine gị na-aga. Iji mee nke a, a na-etinye rotor nwere ọtụtụ agụba n'akụkụ elu nke ụlọ elu ahụ, nke na-adabere na ntụziaka nke ikuku. Ha na-atụgharị gburugburu axis kwụ ọtọ nke na-arụ ọrụ na generator. Ọrụ ya na-ejedebe site na ọsọ nke ifufe, na ugbo ikuku chọrọ nnukwu ala. Na Spain, n'aka nke ọzọ, awa ọrụ nke eletrik eletrik dị n'etiti 20% na 30% nke afọ, ọnụ ahịa dị ala ma e jiri ya tụnyere ọkụ ọkụ na ike nuklia, nke ruru 93%.
Otú ọ dị, a ghaghị icheta na ọ bụ isi iyi ike dị ọcha na nrụnye ndị a adịghị emebi gburugburu ebe obibi. Ugbo ikuku arụnyere n'ọdụ ụgbọ mmiri Bilbao dị na Ponta Lucero mepụtara ike ikuku 7,1 nde kWh na Spain n'ime ọnwa ise mbụ ya. Ọ bara uru karịa ogige ntụrụndụ ndị a iji wuo site n'oké osimiri, ebe ọ bụ na ikuku na-agbasa na mgbawa ma kwụsie ike karịa na ala.
Enwere ụdị dị iche iche nke ụlọ ọrụ ike ndị a. N'ime ha, ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ nke anyanwụ na-eji ohere okpomọkụ nke anyanwụ kpoo mmiri ma jiri uzuoku nke kpo oku na-emepụta na-ebugharị turbines. E nwekwara fotovoltaic osisi ike anyanwụ, ebe ọ bụ Mkpụrụ ndụ fotovoltaic na-ahụ maka ịtụgharị ike anyanwụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik.. Na Spain, anyị nwere ụlọ ọrụ abụọ dị mkpa: ogige Puertollano na Olmedilla de Alarcón fotovoltaic. Ha abụọ nọ na Castilla-La Mancha.
hydroelectric ike osisi
A na-ebugharị turbines nke osisi ndị a site na oke mmiri na-agba ọsọ. Ndị a na-erite uru site na nsụda mmiri, ma ọ bụ ihe okike, ya bụ, mmiri iyi na osimiri na-enweghị isi, ma ọ bụ mmiri mmiri arụrụ arụ nke etinyere n'ime ọdọ mmiri. Na mgbakwunye na ike eletrik nwere ike imepụta, a na-ekewa ha ma ọ bụ kewaa ha dịka ike ha nwere si dị. N'otu akụkụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ mmiri ọkụ, obere osisi eletrik na obere ihe ọkụkụ.
tidal ike ọdụ
Ọrụ ya nwere myirịta na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik. Ma ndị a na-eji ohere dị iche na ọkwa oke osimiri dị n'etiti oke osimiri na nke dị ala. A na-ewerekwa ụlọ ọrụ ike tidal dị ka ndị na-eji ohere nke mmegharị nke ebili mmiri na-ebugharị turbines. N'aka nke ọzọ, e nwekwara oké osimiri iyi, nke na-erite uru ike ike nke oke osimiri ma ọ bụ oke osimiri. Ụzọ a enwechaghị mmetụta gburugburu ebe obibi n'ihi na ọ dịghị ihe mgbochi e wuru iji kpasasịa gburugburu ebe obibi.
Kedu ka ụdị ọkụ eletrik si arụ ọrụ
Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ bụ ụlọ ọrụ na-eme ka ọkụ na-ekpo ọkụ nke ebumnobi ya bụ ịtụgharị ike ọkụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik. A na-eme ntugharị a site na okirikiri uzuoku/mmiri ọkụ. Nke ahụ bụ okirikiri Rankine. N'okwu a, isi iyi nke uzuoku ga-emepụta steam nke na-ebugharị turbine.
Otu ụdị ọkụ ọkụ ọkụ bụ okirikiri jikọtara ọnụ. N'ime osisi okirikiri jikọtara ọnụ, enwere okirikiri thermodynamic abụọ:
okirikiri Breton. Nke a okirikiri na-arụ ọrụ na combustion gas turbine, na-emekarị eke gas.
okirikiri ọkwa. Nke a bụ okirikiri turbine mmiri na-emekarị.
N'ime ụlọ ọrụ ọkụ niile, ihe atọ dị mkpa iji mepụta ọkụ eletrik:
turbine uzuoku. Turbines na-agbanwe ike ọkụ ka ọ bụrụ ike kinetic.
Onye na-atụgharị na-atụgharị n'ibu ike n'ime ọkụ eletrik.
Transformer nke na-agbanwe ihe dị ugbu a enwetara na alternating current na ihe dị iche nwere ike chọrọ.
Mkpa ihe nrụpụta nuklia
A fusion reactor bụ ụlọ ọrụ ebe mmeghachi omume ngwakọta nuklia na-ewere ọnọdụ na mmanụ ọkụ mejupụtara hydrogen isotopes (deuterium na tritium), na-ewepụta ike n'ụdị okpomọkụ, nke. mgbe ahụ ọ na-aghọ ọkụ eletrik.
Ugbu a, ọ dịghị fusion reactors nwere ike iwepụta ọkụ eletrik, ọ bụ ezie na e nwere nnyocha ụlọ ọrụ na-amụ fusion mmeghachi omume na nkà na ụzụ a ga-eji na osisi ndị a n'ọdịnihu.
N'ọdịnihu, fusion reactors ga-ekewa ụzọ abụọ: ndị na-eji mmachi magnetik na ndị na-eji njide inertial. Igwe ihe eji emechi ihe ndọta nwere ihe ndị a:
Ụlọ mmeghachi omume nke mgbidi ọla jichiri.
Na-eche na mmanụ ọkụ dị n'ime ụlọ mmeghachi omume bụ deuterium-tritium, oyi akwa nke ihe mejupụtara lithium nke na-adọta okpomọkụ site na mgbidi ígwè ma na-emepụta tritium.
Ụfọdụ nnukwu eriri igwe na-emepụta oghere magnetik.
Ụdị nchebe radieshon.
The inertial confinement fusion reactor ga-agụnye:
ụlọ mmeghachi omume, dị ntakịrị karịa nke gara aga, ọ na-ejedebekwa site na mgbidi ígwè.
A na-eji ya ikwado ntinye nke ìhè doo ahụ ma ọ bụ ions sitere na laser.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị ọkụ ọkụ dị na àgwà ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Ụdị ọkụ ọkụ